သင်မသိသေးသည့် Google Chrome Feature (၇) ခု – Sunthit Myanmar
သင့်ရဲ့ Google Chrome အသုံးပြူပုံကို ဖော်ပြပါနည်းများ နှင့်အဆင့်မြှင့်တင်လိုက်ပါ။
Pintab ဆိုသည်မှာ website အများကြီးဖွင့်ရာတွင် လွယ်ကူအောင် လုပ်ပေးသောအရာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ သင်website ၁၀ခု ဖွင့်ထားသည်ဆိုပါစို့။ တစ်ခုချင်းစီတွင် Right Clipထောက်ပြီး Pintab နှိပ်လိုက်ပါက icon အသေးငယ်ပုံစံ ဖြစ်သွားပြီး သင်လိုသလောက် website ကိုကြည့်ရှုနိင်ပြီး အမြင်ရှင်းလင်း သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
၂. Block Autoplay Videos
တစ်ခါတစ်ရံတွင် သင်ဝင်ကြည့်သော website တွင်ကြော်ညာ videos များတတ်လာခြင်းဟာ အသုံးပြူသူအတွက် စိတ်အနှောင့်အယှက်များစွာဖြစ်ပါတယ်။ ဤကဲ့သို့ဖြစ်ခြင်းကို တားဆီးရန် Chrome ၏ URL barတွင် chrome://flags/#autoplay-policy ကိုရိုက်ပြီး setting တွင်ပိတ်နိုင်ပါတယ်။
၃. Block Notification Requests
Website မှကြော်ညာNotification များပိတ်ရန် setting ကိုအရင်ဝင်ပါ။ Advanced ကိုနှိပ်ပြီး Privacy and Security ကိုအရင်ဝင်ပါ။ Content Settings ကိုတွေ့ပါက Notification ကိုဝင်ပြီးပိတ်နိုင်ပါတယ်။
၄. Zoom out to normal view
အကယ်၍သင်အသုံးပြုနေသော website ကိုကြည့်ရသည်မှာ နှေးသည်ဟုထင်လျှင် Command-0 (For Mac) ဒါမှမဟုတ် Ctrl-0 (For window) ကိုနှိပ်ပြီး Zoom ချဲ့ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
၅. Reopen closed tab
သင်မတော်တဆ ပိတ်မိသော tab ကိုပြန်ဖွင့်လိုပါက Command-Shift-T (For Mac) ဒါမှမဟုတ် Ctrl-Shift-T (For Window) ကိုနှိပ်လိုက်ပါက ပြန်ပေါ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၆. Start where you left off
သင်ကွန်ပျူတာပိတ်ပြီး ပြန်ဖွင့်ပါက အသုံးပြူခဲ့သော tab များကိုနေ့စဉ်နှင့်အမျှ အသစ်ပြန်ဖွင့်စရာမလိုဘဲ ဖွင့်လိုပါက Chrome`၏ settingထဲရှိ on startup နေရာတွင် continue where you left off ကို select ပေးထားပါက အလွယ်တကူ အသုံးပြူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၇. See what’s slowing you down
Google Chromeသုံးရတာ လေးနေသည်ဟုထင်ပါက Chrome `၏ညာဘက်ထောင့်တွင် အစက်သုံးစက် ရှိသော icon ကိုနှိပ်ပါ။ More tools ကိုနှိပ်ပြီး Task Managerကို နှိပ်ပါ။ Chrome ကိုလေးအောင် လုပ်နေသော tab ကို select ပေးပြီး end process လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Categorized as Knowledge, Lifestyle, Tech Tagged သင္မသိေသးသည့္ Google Chrome Feature (၇) ခု